हिँउ खेल्न दोलखामा पर्यटकको घुइँचो, पहिलो रोजाइ कालीञ्चोक - Nepal Insider
January 8, 2020 215
काठमाडौं । पर्यटन वर्षको शुभारम्भसंगै दोलखाको धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्र कालीञ्चोकमा हिँउ खेल्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ ।
दोलखाको उच्च भूभागमा केही दिनदेखि बाक्लो हिमपात भएसँगै कालीञ्चोकमा हिउँ खेल्ने पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको हो । हिमपातपछि दोलखामा हिउँ खेल्नकै लागि दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन् । जिल्ला आउने अधिकांश पर्यटकको पहिलो रोजाइ कालीञ्चोक परेको छ । पर्यटक प्रायः कालीञ्चोकको कुरी जाने, हिउँसँग रमाउने र केबुलकार चढ्ने उद्देश्यले दोलखा आउने गरेको पाइएको छ ।
हिउँ खेल्ने पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास हुँदै गएको कालीञ्चोक क्षेत्रमा भारतीय मूलका पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइन्छ । राजधानी काठमाडौँ तथा तराईसँग सहजै छोटो दूरीमा सडक सञ्जालले जोडिएको कारण कालीञ्चोक क्षेत्रमा तराई तथा भारतीय मूलका पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको पर्यटन व्यवसायी दावा लामाले बताए ।
तराईबाट छोटो दूरीमा र काठमाडौंबाट नजिकै रहेका कारण राजधानीबाट मात्र दैनिक हजारौँ आन्तरिक पर्यटक कालीञ्चोक क्षेत्रमा पुग्ने गरेको पाइन्छ । हिमाली जिल्ला दोलखाको रमणीय क्षेत्र कालीञ्चोकमा कालीञ्चोक भगवतीको दर्शन गर्न र हिउँ खेल्नकै लागि कालीञ्चोक पुग्ने गरेको पर्यटकले बताएका छन् ।
कालीञ्चोक क्षेत्रमा मात्र हाल दैनिक पन्ध्र सयभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने गरेको कालीञ्चोक कुरीस्थित होटल सुनपातीका सञ्चालक हरि वलीले बताए । कुरी क्षेत्रमा पर्यटकलाई लक्षित गरी सुविधा सम्पन्न करिब १०० होटल सञ्चालनमा रहेका छन् । पर्यटकको मागलाई लक्षित गरी कालीञ्चोक क्षेत्रमा मात्र तीन हजार ५०० देखि चार हजारसम्म पर्यटक सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी होटल सञ्चालनमा रहेको व्यवसायी वलीले बताए ।
ती सबै होटल एक सातासम्मका लागि बुकिङ भइसकेको उनको भनाइ छ । होटल सबै बुकिङ भए पनि बाक्लो हिमपातका कारण गाडी पाँच किमी तलबाटै कुरीसम्म पुग्न नसकेकालो समस्या भएको जनाएका छन् । हिउँका कारण कुरीसम्म पुग्नका लागि समस्या भएपछि चरिकोटका होटल समेत भरिभराउ छन् । हिउँ परेपछि कालीञ्चोकमा पिउने पानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको स्थानीय होटल व्यवसायी सोनाम शेर्पाले बताए । उनले ट्याङ्करबाट पानी ल्याएर व्यवस्थान गरिएको पनि बताए ।
राजधानी काठमाडौँबाट १३३ किमीको सडक यातयताबाट चरिकोट पुगेपछि १७ किमी दूरी पार गरेर कालीञ्चोक पुग्न सकिन्छ । धार्मिक आस्था तथा हिउँ खेल्नका लागि भारतीय पर्यटक दोलखामा आउने गरेको छ । नेपालकै तेस्रो केबुलकारसमेत कालीञ्चोकमा सञ्चालनमा रहेका कारण हिमाली क्षेत्रमा केबुलकारबाट मनोरञ्जन लिनका लागि समेत पर्यटक कालीञ्चोक पुग्ने गरेको पाइन्छ ।
केही दिनदेखि लगातार हिमपात भएसँगै कुरी तथा कालीञ्चोक मन्दिर आसपासमा तीन फिटभन्दा बढी हिँउ जमेको छ । तीन हजार ८४२ मिटरको उचाइमा रहेको यो क्षेत्रमा पुसदेखि फागुनसम्म हिमपात हुने गर्छ । हिउँदको समयमा सधैँजसो हिउँ पर्ने हुँदा हिउँमा खेलिने खेल स्कीका लागि पनि पर्यटक कालीञ्चोक क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन् । यस क्षेत्रबाट हिउँको मज्जासँगै गौरीशङ्कर हिमाल, रोल्वालिङ हिमशृङ्खलालगायत विभिन्न क्षेत्रको अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
जिल्लामा परेको हिमपातसँगै सय थुम्का रहेका शैलुङमा पनि हिउँ खेल्न आउने पर्यटको सङ्ख्या वृद्धि भएको शैलुङ गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसैगरी जिल्लाको खरीढुङ्गा, च्योर्दुङ, खावा, डाँङ्डगे डाँडालगायत क्षेत्रमा पनि हिउँ खेल्ने आन्तरिक पर्यटकको चाप बढ्दै गएको छ ।–प्रभु जिरेल – रासस
Prevचौधरी समूहको पशुपति विस्कुट उद्योगमा भीषण आगलागी
Nextयूकेको यात्रामा सन्ध्या बुढा
नवीना लामाले भनिन् : नेकपामा ‘भालेवादी’ चिन्तन हाबी
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर नेपालमै मृ’त्यु भए पनि आफन्तलाई यति धेरै रकम पाउने हेर्नुहोस
जिउदो “मुना मदन” रुपा र कृष्णको सत्य प्रेम कथा
मनछुने कथा “” असल श्रीमती “” महिलाले एकचोटी अबस्य पढौं अनि पुरुषले शेयर गरौँ (28503)
‘नेपालमा फेरी ८ रेक्टर भन्दा ठूलो भूकम्प जाने सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह’ – अध्ययन प्रतिवेदन (12735)
अस्ट्रेलिया काण्ड: के भएको रहेछ खास ? युवती आइन् लाइभमा (भिडियो) (10313)
पेट दुखेर अस्पताल पुगेका यी पुरुष गर्भवती भएको रिपोर्ट आएपछि (6790)
भोली देशभर सार्वजनिक विदा (6055)
सवारी दुर्घटनामा गायक निशान भट्टराईको निधन (5622)
पोखराकी २६ वर्षीया सुनीता पौडेल जन्माइन ३ छोरी र १ छोरा चम्ल्याहा बच्चा (4737)
पाँच रुपैयाँमा खाना बेच्दा १५ दिनमै उठ्यो नसोचेको यतिधेरै पैसा,थामिएनन कुमारका आँसु, अब यस्तो गर्ने योजना (भिडियो हेर्नुहोस) (4709)
कतारबाट भटाभट फिर्ता गर्न हुन् थाले नेपाली ! (4536)
नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौं आएको जेटविमानमा ल्याण्ड हुने बेलामा आगलागी (4455)
अजिता भुजेललाई गु’माउनु पर्दा वृद्ध हजुरवुवा र हजुरआमाको आँखा ओभाएको छैन
मापसे गरेर सवारीसाधन चलाउन चालक हिरासतमा बस्नुपर्ने !
आज फेरी बढ्यो सुन चाँदीको मूल्य